Lumia 950 နှင့် 950 XL စမတ်ဖုန်းများကို Microsoft ပွဲထုတ်မိတ်ဆက် | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» Lumia 950 နှင့် 950 XL စမတ်ဖုန်းများကို Microsoft ပွဲထုတ်မိတ်ဆက် Lumia 950 နှင့် 950 XL စမတ်ဖုန်းများကို Microsoft ပွဲထုတ်မိတ်ဆက် Mobile သတင်းများ
သည် ကုမ္ပဏီ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် စမတ်ဖုန်းသစ် နှစ်မျိုးဖြစ်သော Lumia 950 နှင့် 950 XL တို့ကို အင်္ဂါနေ့က ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Microsoft သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလက Nokia ၏ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် စမတ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ ဈေးသက်သာသည့် ထုတ်ကုန်များကိုသာ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့က သင့်ရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲမှာ Windows ကို ထည့်ထားဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒီဖုန်းတွေဟာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုမျိုး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်” ဟု အရည်အသွေးမြင့် Windows ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်သူ ပါနော့စ်ပန်နေးက နယူးယောက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
၅.၂ လက်မ display ပါဝင်သော Lumia 950 တွင် hexa-core Qualcomm processor
ပါဝင်ပြီး ၅.၇ လက်မ Lumia 950 XL တွင် octa-core Qualcomm processor ကို အသုံးပြုထားသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ကုန်နှစ်မျိုးစလုံးတွင် 20-megapixel ကင်မရာ ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် အလင်းနည်းသည့် နေရာတွင် ဓာတ်ပုံများကို အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အရည်အသွေးဖြင့် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် စမတ်ဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံးတွင် optical image stabilization နည်းပညာ ပါဝင်ကြောင်း ပန်နေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
Lumia 950 ၏ တန်ဖိုးမှာ ၅၄၉ ဒေါ်လာ (၃၆၀ ပေါင်) ဖြစ်ပြီး 950 XL မှာ ၆၄၉ ဒေါ်လာ (၄၂၅ ပေါင်) ဖြစ်သည်။ ၎င်းစမတ်ဖုန်း နှစ်မျိုးစလုံးကို နိုဝင်ဘာလတွင် အမေရိကန်၌ စတင်ရောင်းချမည် ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျတွင် ရောင်းချမည့် ဈေးကို မကြေညာသေးသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ခရစ္စမတ် မတိုင်မီတွင် ရောင်းချမည်ဟု သိရသည်။
: Lumia 950 နှင့် 950 XL စမတ်ဖုန်းများကို Microsoft ပွဲထုတ်မိတ်ဆက် Description
: Microsoft သည် ကုမ္ပဏီ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် စမတ်ဖုန်းသစ် နှစ်မျိုးဖြစ်သော Lumia 950 နှင့် 950 XL တို့ကို အင်္ဂါနေ့က ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ပေ...
Wai Lin Kyaw
Myanmar font & Myanmar keyboard အဆင်ပြေမပြေသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.zaypa&wechat application များလည်းရှိပါသလားခင်ဗျာ
ဖုန်းထဲမှာ effect တွေ အမိုက်စားနဲ့ လုပ်မယ် - Insta...
ဓာတ်ပုံပြုပြင်,Color Effect ဖန်းတီးနိုင်တဲ့-Pho.to...
လက်တလော မြန်မာပြည် ဈေးကွက်မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ T...
Android ဖုန်းထဲကနေ Facebook Video တွေကို အမြန်ဆုံး...
လူအစစ်မဟုတ်တဲ့ ကွန်ပြူတာဖြင့် ဖန်တီးထားသော ဂျပန် မ...
Root Call Blocker Pro v2.5.3.10.B65 for Android(l...
Paranormal Pursuit v1.3 apk + DATA
XIAOMI သမားများအတွက် Firmware နဲ့ App တွေကို Updat...
ကြိုးတပ်စရာမလို့ပဲ အားသွင်းလို့ရမယ့် uBeam
သင့်ဖုန်းအတွက် အလုံခြုံ ဆုံး Virus Security ဆော့ဝဲ...
"MPT မိုဘိုင်းဖုန်းများ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့တွင် ...
Android Software နဲ့ Hardware ပိုင်းကိုအခြေခံသဘောတ...
Android ဖုန်းများ Software ကြောင့်ဖုန်းပူခြင်း / ပ...
ဖုန်းကို ပေ့ါပါးစေတဲ့ - Clean Master (Boost & AppL...
Notification တွေကိုရောင်စုံသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့- Lig...
Android Device တွေကို ပေါ့ပါးစေတဲ့-BusyBox Pro v29...
Facebook မှာ Auto Play Video များကို ပိတ်နည်း
Driver Backup and Restore.exe for Window7/ 8 and...
ဒီနေ့ထွက် Facebook Messenger v45.0.0.6.61 (5.0+) A...
Monkey Test အပါအဝင် Ghost Push Virus တွေကို အမြစ်ြ...
Android OS ဖုန်းမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ပုံကို Screen ...
ဖုန်းထဲ့မှာသီချင်းနားထောင်းရန်- Shuttle+ Music Pla...
C+G HANDEST ကို G+G (G နှစ်ကဒ်ထိုးဖြစ်အောင်လုပ်နည်...
System App တွေကို Uninstall လုပ်ပေးမယ့် - Root Uni...
Candy Blast Mania For IOS
Fitness for Weight Loss Pro For IOS
မိသားစုလူနေမှု ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အားပေးတိုက်...
ငါးရက်အတွင်း Microsoft Surface Book များ အကုန်ရောင...
Samsung ၏ ဒုတိယမြောက် Tizen စမတ်ဖုန်းကို အိန္ဒိယတွင...
ဓာတ်ပုံတွေကို ခပ်မိုက်မိုက်ပြုလုပ်မယ်-PicsArt – Ph...
DU Battery Saver丨Power Doctor Pro v3.9.9.9.1 APK
စာဖတ်ရူနိုင်ရန်လိုအပ်မယ် - Moon+ Reader Pro v3.2.0...
ဖုန်းထဲမှာ မိမိ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရိုက်ကူးထားမယ်-Re...
MIRACLE BOX OR PARANHA BOX ကနေ BACKUP လုပ်ထားတဲ့ ....
Android OS ဖုန်းပျောက်ရင် ဒီကောင်းလေးနဲ့ လေချွန်ပြ...
ဖုန်းနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဓာတ်ပုံ အလန်လေး ရိုက်မယ် - ...
ဖုန်းထဲမှာ chat Video call ခေါ်မယ်-WhatsApp Messeng...
ဗွီဒီယိုကြည့်မယ် သီချင်းနားထောင်မယ်-VLC for Androi...
iPhone အတွက် ဖောင့်အလှများ
3D Touch ကဲ့သို့သော feature များကို Android ထုတ်ကု...
Lumia 950 နှင့် 950 XL စမတ်ဖုန်းများကို Microsoft ...
“ဆွေသဟာရယူထားသူများ ဖုန်းခေါ်ချိန် ၅မိနစ်ကျော်လျှင်...
Monkey test နဲ့ Time service, virus ပြဿနာ
iOS9တွင် Passcode ကျော်၍ ဖုန်း Contact များအတွင်...
Nexus 6P နှင့် 5X စမတ်ဖုန်းသစ်များကို Google မှထုတ...
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဝင်ခွင့်များ စတင်လျှောက်ထားနို...
Facebook ပေါ်က Video တွေကို ခပ်မြန်မြန်ဒေါင်းယူမယ်-...